साधारण कारण किन गुगलले तपाईंको साइट खडा गर्न सक्दैन - Semalt विशेषज्ञ द्वारा जवाफ
यदि तपाइँ एसईओमा किवर्ड स्टफिंग आवश्यक छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ एक ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ! कीवर्ड स्टफिंग भनेको शब्द हो जुन तपाईं गुणवत्तामा कुनै ध्यान नदिई धेरै शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर वर्णन गर्दछ। अर्को शब्दमा, हामी भन्न सक्दछौं कि यसले लेखमा धेरै वाक्यांशहरू र अर्थहीन शब्दहरू समावेश गर्दछ र वेबमास्टर्सको उद्देश्य अधिक र अधिक ट्राफिक ल्याउनु हो, उनीहरूको साइटहरूको खोजी इञ्जिन स्तर निर्धारण। दुर्भाग्यवश, कीवर्ड स्टफिंगले गुगललाई तपाइँको वेबसाइटमा दण्ड लगाउँदछ।
जे होस्, Segt ग्राहक सफलता प्रबन्धक Igor Gamanenko भन्छ कि सही कुञ्जी शब्द घनत्व मा चिपकाएर यो दण्डबाट जोगिन सम्भव छ। तपाईंले धेरै शब्दहरू र वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुहुन्न किनकि यसलाई खोज ईन्जिनहरूले स्पामको रूपमा चिन्ह लगाउनेछ। साथै, तपाईंले यो बिर्सनु हुँदैन कि गुगलले कुञ्जी शब्दहरू हल्का रूपमा लिदैन। वास्तवमा, यसले यो सुनिश्चित गर्न केही रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरेको छ कि सबै लेखहरू सही प्रवाह, भाषाको साथ लेखिएको छ र त्यहाँ कुञ्जी शब्दहरूको कुनै भरपाई छैन। यहाँ हामी तपाइँलाई कसरी कुञ्जीशब्द भरिन्दा बेवास्ता गर्ने र एक सभ्य स्तरमा तपाइँको सामग्रीको गुणवत्ता राख्न को लागी बताउँछौं।
कीवर्ड स्टफिंग भनेको के हो?
हामीले अरू केहि पनि छलफल गर्नु भन्दा पहिले मलाई तपाईलाई भन्नुहोस् कि कीवर्ड स्टफिंग तपाईको सामग्रीमा कुञ्जी शब्द र वाक्यांशहरूको अनुपयुक्त प्रयोग हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईका लेखहरू राम्रा लेखिएका छन् र SEO उद्देश्यका लागि न्यूनतम शब्द गणना का पालन गर्नुहोस्। तपाईंले किवर्ड स्टफिंगको आधारभूत अवधारणालाई पनि बुझ्नु पर्छ। जब एक एसईओ विशेषज्ञ काम गर्दछ, उसले वा उसले तपाइँको वेबसाइटको रैंकिंग सुधार गर्न कुञ्जी शब्दहरू खोज्दछ। वास्तवमा, यस्तो छायादार प्रविधिहरूले तपाईंको सामग्रीलाई शीर्षमा ल्याउन सक्छ, तर परिणामहरू कहिल्यै स्थायी हुँदैनन्।
एकचोटि तपाईंको साइट गुगलको पहिलो पृष्ठमा पुग्छ, खोजी ईन्जिनले यसको गुणस्तरको मूल्या will्कन गर्दछ र यसलाई तल ल्याउन सक्दछ यदि तपाईंले कुञ्जी शब्दहरूले भरिपूर्ण गर्नुभयो भने। यसैले तपाईं कहिले पनि एसईओ विशेषज्ञ भाँडा लिनु हुँदैन जो बेवकूफ लेख लेख्नमा राम्रो छ र क्वाइडर भन्दा किवर्ड स्टफिंगमा बढी ध्यान दिन्छ।
विकिपेडियाका अनुसार, गुगलले कीवर्ड स्टफिंगलाई बेइमान अभ्यासको रूपमा लिन्छ। त्यसोभए स्वतन्त्र लेखक र सामग्री क्युरेटर्सका लागि लेखका लेखहरूको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न यो आवश्यक छ। तिनीहरूले कुञ्जी शब्दहरूलाई न्यूनतममा राख्नुपर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई अधिक र अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ।
कीवर्ड स्टफिंग प्रतिशत:
यदि तपाइँ कीवर्ड स्टफिंग प्रतिशतको बारेमा दुविधामा हुनुहुन्छ भने, मलाई तपाइँलाई भन्न दिनुहोस् कि तपाइँले कुनै लेखमा प्रयोग गर्नुहुने केही कुञ्जी शब्दहरू Google का नियम र कानूनको अनुरूप हुनुपर्दछ। प्राय: एसईओहरूले सिफारिश गर्दछ कि कुञ्जीशब्द घनत्व दुई प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुन्न र उत्तम कुञ्जी शब्दहरू तपाइँको लेखहरूमा हाइलाइट गर्न सकिन्छ। तपाईं धेरै उपकरणहरूको साथ कुञ्जी शब्द घनत्व गणना गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई एक कुञ्जी शब्द key००-शब्द लेखमा दुई पटक भन्दा बढि प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन्छौं। तपाईं शब्द गणना बढाउन सक्नुहुन्छ र चार देखि पाँच पटकमा समान कुञ्जी शब्द समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो अधिकतम सीमा हो।
मोज़ले मद्दत गर्न सक्छ:
Moz.com एक प्रसिद्ध SEO परामर्श साइट हो, जुन तपाइँलाई तपाइँको सबै SEO सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान प्रदान गर्दछ। तपाईं यस साइटमा खाता सिर्जना गर्न र प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको सदस्यता लिन पनि सक्नुहुनेछ र प्लगइनहरू डाउनलोड गर्नुहोस् जुन तपाईंको साइटलाई सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ।